सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि बलात्कारको आरोप, के हो यथार्थ ?
सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि बलात्कारको आरोप, के हो यथार्थ ?
काठमाडौं - सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि एक महिलाले गम्भीर आरोप लगाएकी छन्। संघीय संसद् सचिवालयमा कार्यरत ती महिलाले सभामुख महराले आफूलाई बलात्‍कार गरेको आरोप लगाएकी छन्।
'संसद् सचिवालयमा स्वास्थ्यको दरबन्दी छैन। दरबन्दी बनाइदिनुपर्‍यो भन्नुभएको थियो, मैले गर्न मिल्ने कुरै होइन', महराले भने, 'भनेको नमानेपछि ममाथि निराधार आरोप लगाउनुभयो।' आफ्नो सचिवालयका तर्फबाट औपचारिक विज्ञप्ति आउन लागेको भन्दै महराले त्यसलाई पर्खिन भने।